ठगीको आरोपमा पक्राउ २ नेपालीको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
ठगीको आरोपमा पक्राउ २ नेपालीको पोर्चुगलमा सुनुवाई सुरु (भिडियो सहित)
विष्णु पौडेल पोर्चुगल, चैत २९
नियम विपरित कामदार राखेको भन्दै दुईजना नेपालीलाई पोर्चुगिस अदातलमा पेश गरिएको छ। उनीहरुलाई एक बर्ष अघि अनुसंधानको लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। पोर्चुगलको खेतीपातिकालागि स्टीमामुन्दो नामक कम्पनी खोली २३ जना नेपाली कामदारहरुको श्रम शोषण गरेको आरोपमा अध्यागमन विभागले सर्च अप्रेशन जारी गरेको थियो।
गत शुक्रवार अदालतमा पेश गरिएकोे मुद्दा सोमवार देखि सुनुवाई शुरु भएको छ। अदालतमा पेश गरिएका नविन गिरी र उपेन्द्र पौडेललाई अध्यागमन विभाग सेफले पोखरा अप्रेशनको नाम दिई सर्च गरेको थियो। कामदारहरुलाई तलव नदिएको, न्युनतम सेवा सुविधावाट वञ्चित गरेको आरोप छ।
अधिवक्ता अन्टोनीओ व्रान्डीयो डिमियोकाले स्थानिय संचारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार २३ जना नेपाली कामदारहरुलाई यहांको नियमअनुसार तलव स्केलअनुसार सेवा सुविधा नदिएको कारण अभियूक्तहरुलाइ अदालतमा पेश गरिएको हो।
पोर्चुगलको खेतीमा कामगर्ने नेपाली तथा विदेशी कम्पनीहरुमा कार्यरत मजदुरहरु माथी श्रम शोषण भएको उजुरी परेको आधारमा सर्च अप्रेशन गरिएको थियो। खेतमा कामगर्ने कर्मचारीको अबस्था र कम्पनीको कानुनी प्रकृयाको वारेमा नेपाली नामै राखेर गरेको यो पहिलो अप्रेशन हो। कम्पनीको संचालन यहांको कानुनी प्रकृया अन्र्तगत छ की छैन? कामगर्ने कर्मचारीको अबस्था कस्तो छ? नियम संगत तलब पाएका छन् की छैनन भनि अनुसंधानलाई तिव्रता दिएको थियो ।
यस अघि अप्रेशनको क्रममा दुईजना नेपाली सहित एकजना पोर्चुगीस नागरिकलाई अबैध कार्यमा सम्लग्न रहेको प्रमाण सहितको कागजपत्रहरु एकथान कम्प्युटर र केहि नगद रकम प्रहरीले वरामत गरेको थियो। एउटा कोठामा ७ जना भन्दा बढी कामदारहरु बस्ने गरेको, दुर्घन्धीत खाना, अव्यवस्थीत कोठा, दुर्घन्धीत वाथरुम भएको टेलिभिजले फुटेज प्रशारण गरेको छ । खानामा झिगां बसेको दृृष्य सहितको फुटेज प्रशारण गरेपछि खेतीमा कामगर्ने मजदुरहरुको वास्तविक अबस्था छर्लङ्ग भएको छ। नेपाली कामदारहरुको दुराअबस्था सहितको फुटेज टेलिभिजनवाट प्रशारण भए पछि सबैको चासोको विषय बनेको थियो।
खेतीमा सामान्यतया घण्टाको आधारमा ज्यालाभुक्तान गरिन्छ। कुनै कम्पनीमा कामदारले टिपेको कृषीउपजहरु किलो गनेर ज्याला दिने गरिन्छ। कर्मचारीहरुको सम्पर्क सिधै मालिकहरु संग हुदैन वीचमा मोटो कमीसन खाने एजेन्टहरु हुन्छन्। उनिहरुसंग श्रम सम्झौता गरेर काममा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी काममा जाँदा कामदारहरु सोझै मारमा पर्दछन्। पोर्चुगलको नियम अनुसार कर तिरेको आधारमा कार्ड बन्ने भएकोले कामदारहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बुझाईदिने तर कम तलब दिने गरि नेपाली कम्पनीहरुले कामदार राख्ने गरेका छन्।
करीव तीनहजार भन्दा बढी नेपालीहरु खेतीमा काम गर्ने गरेका छन्। साथै एक दर्जन भन्दा बढी नेपालीहरुले खेतीमा कामलगाउने एजेन्टको रुपमा काम गर्ने गरेका छन्। त्यसकोलागि आधिकारीक रुपमा कम्पनी खोल्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सन २०११ देखि नेपालीहरुले पोेर्चुगलको खेतीमा कामगर्दै आएका छन् । कृषि मजदुरको रुपमा काम पाएपछि नेपालीहरुले धेरै राहत समेत पाएका छन्। कामपनि पाइने र कागजी प्रकृयामा सरलहुने हँुदा नेपालीहरुको आर्कषण खेती बन्दै गएको छ। केहि बर्ष यता नेपालीहरुले कम्पनी खोलेर खेतीमा कामदारहरु पठाउदै आएका छन्। यो निकै राम्रो पक्ष हो। धेरै नेपालीहरुको रोजीरोटी खेतीको कामवाट चलेको छ।
एनआरएन पोर्चुगलका अध्यक्ष भीम कमल केसीले भन्छन् ‘मजदुरको श्रमशोषण गर्नेलाई अनुसंधान गर्नु स्वाभाविक हो। व्यवस्थित ,कानुन सम्मत कम्पनि संचालन गर्नकालागि सचेत बन्नु अनिवार्य छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७३, ११:०४:१५